Waa in xal loo helaa balwada Geediga | Somaliska
Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Sweden waxay leedahay hal balwad oo inta badan ay ka simanyihiin. Sida caadiga ah balwad kasta waxay leedahay saameyn ay ku yeelato qofka leh. Balwada ay leeyihiin Soomaalida sweden waa geediga oo ah in aysan meel si rasmi ah u degin, waxaad arkeysaa qof hada magaalada soo degay oo ku weydiinaya sida guri looga helo magaalo kale.
Kuwo waxaad arkeysaa wadanka 8 sano joogay oo toban magaalo soo degay ilaa hadana geedi ku jira. Waxyaabaha aan wax uga qabsan weynay dalkaan waxaa ka mid ah in aanan meel ku nagaan. Qofka marka uu sharciga qaato waxaa wanaagsan in uu magaalada uu dego uu waqti ku qaato, waa la wada ogyahay saameynta uu geedigu ku yeesho qofka.
Markaad guurto waxkasta waxaad ka soo bilaabeysaa zero. Asxaab cusub waa in aad sameysataa, guri waa in aad raadsataa, magaalo cusub waa in aad barataa iwm. Xiriirkii aad dhistay mudadii aad ku noolayd magaalada aad ka guurtay waa uu burburayaa.
Arintaan ayaa loo eedeyn karaa dhaqankeena ku dhisan geediga balse lama dhihi karo waa waajib. Soomaalidu in ay meel ku nagaadaan waxaa ku jira mustaqbalkooda. War carabta fiiriya, tuulo yar haddii ay yimaadaan ganacsi ayay ka abuuraan oo kama guuraan. Haddii qofku u guurayo sababo waxbarasho ama shaqo uu magaalo kale ka helay waa la gartay balse haddii aad u guureysa in magaalo kale ay ka cayr badantahay midaada, taasi horumar ma soo kordhineyso.
Qaasatan dadka wadanka ku cusub waxaa haboon in ay meesha ay ka degaan wadanka ku nagaadaan waqti ilaa ay ka dhameeyaan SFIga, ka qaataan Laysanka iyo xitaa in ay dhameeyaan iskuulka Komvux. Qofku waa in uusan ka guurin magaaladiisa ilaa in uu shaqo ka helo magaalo kale mooyee ama waxbarasho.
Balwadaan waxay naga reebtay asaageen. Fikradihiina ku darsada…
Qoys soomaali ah oo carruuro laga qaatay oo berito loogu banaan baxayo Trollhätten
June 12, 2011 at 14:14
Runtii waxaan odhan karaa waa dhaqan aad u adag waxa iminka ina haysta una baahan in wax laga baddalo, haddii aynu sidan kusii soconanna ummadda lama jaan qaadi karno, dadnimadeenana uma wanaagsan oo waxaynu yurub ka noqonaynaa sida qabiilka jibsiga loo yaqaanno ee yurub marba meel iska wareega reer yurubkuna ay yasaan.
Markaa waxaan odhan lahaa anigu muhiimaddu waxa weeye inaad meel laqabsato meeshaana aad ka miro dhaliso horumarna waad ka gaadhi kartaa haddii la dadaalo loona samro ilaahna la tala saarto.
Dadka yurubta inta badan joogayna mid aan idhaahdo kuwa ku cusubna aad mid idhaahdo, kuwiina inta badan joogay iska daaya yurubta kale ee aad u hanqal taageeysaan sida UK, kuwa cusubna waxaan leeyahay meeshaad sharciga ka qaadataan ama aad mar hore sal dhigtaan aamina oo ku nagaada horumarna waad ka gaadhi kartaana insha allah.
* Abu-Xudayfah * says:
Asc , waa maqaal aad u wanaagsan runtii balse aniga waxaan oran lahaa , walaalka maqaalka qoriay DHAQANKEENA REER GUURAAY waa uu wanaagsanaa haddii loo eego odayaasheenii maxaa yeelay iskama aysan guuri jirin ee dantu marka ay ku kalifto unbeey Guurijireeen.
Odayaasheenii , waxay samayn jireen
1: Waraysiyo iyo xog ogaal .
2: Sahan ay u sahminayaan halkii xogta wanaagsan looga sheegay ee iskama ay dhaqaaqi jirin uun.
3: Haddii geedi u soo baxo waxay eegi jireen , in uu yahay mid reerku ka bixi karo , dhan walba tusaale , daltabyada, daaqsinka, soo ceelyeeladka xoolaha iwm.
4: Haddii uu guurana halkaa uu ku guuray waa uu ku nagaadaa oo kama sii hayaamo .
Balse waayahaan danbe dadkeenaan Qurbaha joogay si indha la’aana ayaan u guurnaa , waxaa kale oo aanan anigu u bogin raga Qoraayaasha ah way dadaaleen , balse maahan in dhaqankeenii reer Guuraanimo eeda la saaro, MAAHAN SIDAA .
Odayashii hore aad uu wayn ayay u necbaayeen , geedi haddiise ay ka fursan waayaan , waqtigiisa unbeey la eegan jireen , welibana iyadoo nolashooda ku salaysnaa reer guuraa haddana sida u guurid badnayn .
Balse meeshaan qurbaha dadkii dhamaa reer Guuraa unbeey noqdeen , raggii wax qoraayayna , waxay qaladka la beegsadeen , DHAQANKEENII , taana ilama qumana ee WAXAA QALDAN DADKAAN , iyagaa QALAD U FAHMAY HABKA GEEDIGA .
Mahadsanidiin Wixii qadaf ah , ama saxar ah ka raali noqda.
Kkk abu xudayfi waxba madan hanbayn maxad reer rerty tantakale somalidu waxay ku wacanyihin rer miyinimadii wa gas ayeynu qiima lahayn wayo wakas waxay oranjiren (sanku nefkale ma ogoli iga sarayn karo ) manty waxay noqden dad ugura dhoni iyo halakan cayr badan yasalan
Ustaad Axmed waa sidaa sheegtay , waxaad maqashaybaan filaa dhacdadii yaabka lahayd > Islaan reer miyi ah oo caano teel ah caano wadata ayaa waxa aka horuyimid , nin gaal cadaan ahaa iyo afceliyihiisa ;; turjumaankiisa o soomaali ahaa , markaa meeshu waa miyiga oo waa Gumaystihii Talyaaniga , islaantii ayay caano nasii dhaheen , haruubkii dhiisa ayayna ku siiday caanihii markii Gaalkiina cabay , afceliyihiina ,, turjumaankiina cabay ee uu haruubka u soo celiyay ayay Haroobkii shalwiday tuurtay !!
Markaa ayaa ninkii cadaanka ahaa oo yaaban waydiiyay , afceliyihiisii waar maxay isaga tuurtay haruubkeeda ?
Af celiyihii ayaa waydiiyay bilcaantii sababta waxayna tiri ,, Maxaan ku falaa Haruub Gaal Afka gelshay !!!!???
Gaalkii markii loo sheegay ayuu amakaag awgeed yaabay xanaaqayna , inkastoo yasmado wacnayn , haddana islaantaa kuma qaldanayn oo weligeed gaal maysan la dhaqmin , kiisa cad haba u darnaadee !!
Sidaa awgeed maanta waxaa oo dhan waa Daleel la dhig , sagxadbaa laga fadhiyaa , oo iyagii ayaaba la Tuugsanaa !! Alloow ur noo bixi Aamin .
June 13, 2011 at 01:39
gediga wa wax fican hormarna leh qasarana leh mana xuma sida figradeyda tahay
dhaman somaliyey wada gur guritanka aad u badiya her sweden dhaman wadamada yurub guritanka ha la badiyo socdalka waya aragnimo iyo faido ayu ley yahay gediga wa
in aad l badiya guritanka guryahay magaloyinka o ad kala badalato aniga inta an marekacnka dagna ila yurub ayan hada joga o an maraya waxan maraya o an dagay 60 magalo wana ku farax sanahay faido badan ayan kala kulmay
maka ugu horeso waxan salaan qaali ah u soo gudbinya dhaman walaalaha somaliyeed meel kasto aay joogaan asc.marka xige waxan rabaa in aan oraah ka iraahdo (Waa in xal loo helaa balwada Geediga) taaso ah mid dhaqan soo jiren ah marka laga eego reer miyga waxa aay caan ku yihiin geediga kaaso ah in aay xoola dhaqatada aay had iyo jeer u guuraan mereshii aay nakh xoolaha uga heli karan ayagoo ku guraya meeshii ay xoolaha uga heli lahayen biyo iyo baad.
laakin waxa su al mudan maxa keenay in qofka iskaga guuro dhoor magalo asagoo ka helaya meeshii uu dagan yahay wax walbo uu ka heli laha mesha uu u guraraya
hadaba jawaabta waxa ya tahay mesha waxa dagan reer aan isku cid nahay ama qarabo ama qabilka ayaa u badan degankas taaso dad badan aay amisan yihiin oo somali ah waxa tu saalo uga soo qadan karna dhoor magalo aay reer reer u dagan yihiin somalida hada ka hor ayaan waxan booqday kam oo inta badan qof kasto oo soo galooti ah aay caado ka tahay in uu soo maro nin ayan kula kul may markii uu i weey diiyay magalada aan ka imaday waxuu ii raaciyay wax xidaha uu asaga ka dhashtay meesha ma daganyihiin kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk shalay reer miyga waxa aay geedigooda aha biyo iyo baad laakin maanat somalida waxa ay wada noqotay reerkeyga aya dagan meeshaa
asc, dhamaantiin waan ni salamayaa, si qaas ah na waxaan usii salamayaa qoraaga. walaal marka hore hadii aan si fican u fahmay qoraalkaga. mawduuca aad ka hadleyso waa mid saaid u muhiim ah, anfacayanna dhamaan dadka somaliyeed ee jecel inay gadhaan wax hormar ah. ma rabbo inaan galo mawduuc kale oo aan ahayn ka aad soo qortay.. haddabba aniga iyo dhawr wiil oo kale ayaa waxaan deganahay magalada ku taala waqooyiga ee loyaqaano skellefteå. waxanan dhiganaa gymnasiet ammaba dugsi sare, waxan bilawnay gymnasiet sanadkii hore, insha allah marka iskuulku u furmana waxan bilabi dona labaad. waxan nahay afar wiil, oo ka noogu soo horeyay u wadankan yimid amma u jooga sweden 3 sanna halka seddex dayada kale aan joogno mid labbo sanno iyo dhawr bilood. wey jiraan dad badan oo naga soo horeyay oo ila immika dhigta IVIK amma SFI, haddaba guuritaanka ka la guurguura muxuu ku yeelan karaa sameyntaada dhanka la qabsashada wadankan amma waxbarashadaba ,, waxan marqaati ka ahay wiil aan isku waqti nimid ayaa u guuray magaalo kale kadib markii uu sharciga helay oo uuna jooga wadan hal sanno,, waxanu dhiganayey sfi . markii u guuray kadib oo magaalo kale u guuray ayaa looga soo bilaabay meeshi uu kabilabay markii uu wadanka yimid. marka aniga waxa iga tallo oo aan kulatalinayaa dhalinyarrada siiba kuwa da’da yar ee wadan ka kaligood yimaada inay waxbarashada heerka ugu yar ku dhameystaan meesha ey kow degaaan oo anay markasta intay ay magalo kale u garaan kow uga soo bilabin oo anay waqti iska qasaarin…. wanad ku mahasantahay wacyi galintada
asc walaahi hadii aan soomli nahay dadka waan ka danbeena waa run carabta meel kasto oo ay imaado waxay ka furtaan dukaamo lakin anaga hadan somali nahay ceerta iyo waxa yar oo ay nasiiso aya ku qanacsanahay qar waxad arkeysa ku dhahayo marka iskulada la joogo war maxan swedish ka baranaya shaqaba kuma helayo misa luqad hormarsan ma ahe marka waa cajiib meesha aan ka habaaranahay hadan somali nahay waxan idín ku dar daarmaya in aad diintiina ku dhagnaatan aad aduunkan inta aad joogtan ka faa ideysatan xag ale iyo xaga aduunkba markastana isku dar daarantaan cibaada ale sw ilaahna ka baridan wax wanbagsan wadankeena nabad ilaah ha nooga dhigo aana isku dayno in aan la qabsano wadankan aan joogno walilaahi toowfiq asc
ASC WALLA SHEKADAN BEEN MAHAN XAAFAD AAN DAGANAHY WAA MAGALO GURYAHEDA RAQIIS YIHIN MACIISHADA CARAB BADAN OO WAXKASTA AAD U BAHANTAHAY AAD KAHELAYSO NOLOSHA JAWIGA WA MAGAALO K HEERSARESA WAXBARASHADNA KU WANAGSAN WAXA LA DHAH NORRKÖPING WAXAA JOOGA SOOMALI AAD UFRABADAN OO AH DAD CUSUB SIDA ANIGA OOKALE MARKA QOF SALANTO WAXUU KULEYAHAY SAXIIB ISHEEG MEEL FIICAN AAN U GURE ESKLATUNA FIICANA LA DHDAHY STOCKHOLM AA SHAQO LAGA SHEGAY MAGALADA WAXAY LEDAHY XAAFADO KABAXSAN MAHALADA OO YARYAR SIDA MIDA AAN ANIGA KAGA NOOLAHAY OOKALE MAGACEDANA LA DHAHO ÅBY SAXIIB ÅBY WAANACAY CENTERKA GURI MAKA HELA WAANA ISKU XAAFADII LEE YAAB ANIGA XATA QUDHAYDA KAMA MARNI SHEKADA MARMAR WAAN NECA MEESHA SANAD JOOGO MAXAA LAGU DAAWEEN KARAA CUDURKAAS REER GUURAAGAA SAAXIIB JIMCAALE WAA MID SOOMALIDA DHAN AY QABANA SAX LAKIN MALAISKU QASBIKARO WAAYE SUAASHA INTA AAN HORMARKENA KATALINAYNO OO WAX KABARANAYNO LUUQADA OOKALE IYO BAABUUR WADIDIDA SHAQO KABARANAYNO SOOMALIYAYA YURUB WAAISKU MID WAA GURYAHAAS BIYAHAAS IYO CADAANKAAS WAAIN AAN ANGANA WAX KA QABSANA MESHA TAGNO SIDA QEERKEENA AAN GAARNA DADKAAN WAXAY SAMAYSTEEN OOKALE DADKAAN AYAGA XATA WADANKOODA USOO HALGAMAY OO QURUXDAAN KA DHIGTAY AAN LADHISNO ANAGANA AANA KEENA KU DULDHISANO OO HORMARKENA KU GAARNO ILEE AYAGABA 9 BIL AALAGU DHALAY MAXA NOO KENY IN AAN QABIIL ISKULAYNO IYO QURUN MAXA NOOKENAY QOF ILLAHAY NAFTA GALIYAY IN AAN DILNO KII QALDAN OO QALAD GALA WAA XIREENA 13QOF WANAGSAN OO AQOON LEH OO MAAL ADUUNYA LEH AA MAAN TA SOOMALIAYA DHISI KARTA CAASIMADEEDA DHUL GAALNA MA IMAANEEN WAA KALABAN LAHEEN ILLAHOOW DALKENA NABAD NOOGA DHIG AAMIIN OO DADKEENA SALKOODA QABOOJI